The Ab Presents Nepal » काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिन पानी व्यापारीको यती ठूलो चलखेल !
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिन पानी व्यापारीको यती ठूलो चलखेल !
काठमाडौं -: सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसित सल्लाह गरी उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने मिति तय गरेको थियो– २७ माघ २०७५। तर, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले नियोजित रूपमा ठेकेदारलाई भगाए। आयोजनाले ठेकेदारलाई दिनै पर्ने भुक्तानी नदिएर भगाइएको थियो।
अचम्म त के छ भने खानेपानी व्यापारमा संलग्न व्यक्ति कसरी आयोजनामा कार्यकारी प्रमुख भए ? कँडेल गत वर्षको असार ३ देखि आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उनी उपत्यकाभर खानेपानी आपूर्ति गर्ने सरकारी निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का अध्यक्षसमेत भए। उनी केयूकेएलका सञ्चालक समिति सदस्य छन्।’
पुनः अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। केयूकेएलको नियमावलीअनुसार व्यापार÷व्यवसाय गरेको, केयूकेएलसँग व्यापारिक स्वार्थ भएको व्यक्ति यसको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि अयोग्य मानिन्छ। कानुनतः अयोग्य हुँदाहुँदै कँडेल पदाधिकारीमा मनोनीत हुन सफल भए।कँडेलले पत्नीका नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि विभिन्न सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति गर्ने जाँचोपाँजो भने आफैंले मिलाएका छन्। उनी आफैं हाकिम भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा उनकै कम्पनीले जार र ट्यांकरको पानी आपूर्ति गर्ने गरेको फेला परेको छ। उनको कम्पनीको पानी अन्य कम्पनीको तुलनामा प्रतिजार २० रुपैयाँ महँगो छ’।
क्रिस्टल आक्वाले मेलम्ची खानेपानीबाहेक, खानेपानी विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रम विभाग र मेलम्ची उपयोजना (पीआईडी)मा पनि पानी आपूर्ति गर्दै आएको छ।आयोजना प्रमुख कँडेलले व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गर्न आफ्नो परिवार स्वतन्त्र रहेको बताए। परिवारले व्यवसाय गरे पनि मेलम्ची आयोजना प्रमुखका हैसियतमा आफूले कतै प्रभावित नपारेको पनि उनले उल्लेख ग’रे।
उपत्यकामा जारमार्फत दैनिक २० लाख लिटर र बोतलबाट साढे २ लाख लिटर पानी आपूर्ति हुने गर्छ। केयूकेएलका अनुसार उपत्यकामा खानेपानीको दैनिक माग साढे ४१ करोड लिटर छ। आपूर्ति भने १० करोड ७२ लाख लिटर मात्र छ। उपत्यकामा ट्यांकरबाट मात्रै दैनिक ५ करोड लिटर पानी बिक्री हुने गर्छ’।
यो समाचार विकास थापार सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपुर्णपोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन्।